by Beverly Obere on July 21, 2021
09/22/2021 09:51 elekere GMT
Uru nke mgbasa ozi ndị ọzọ pụtara ìhè taa karịa n'oge gara aga. Nke a bụ otu ihe dị mkpa maka oke ịrịọ nke mmemme mgbasa ozi na azụmaahịa n'etiti ọtụtụ narị ndị ọkachamara azụmaahịa net.
Imirikiti teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke oge a emeela ka ndị ahịa na-azụ ahịa n'ịntanetị nweta data ha na ọnụ ọgụgụ ego ha nwetara na nkeji oge ha na-ere ahịa. Ọ dị ugbu a enwere ike iji azụmaahịa dịka PayPal maka mmezi yana akwụkwọ ọnụahịa. Nke a emeela ka ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-echere ịkwụ ụgwọ ya site n'aka ndị na-ere ahịa.
Ma ndị mmekọ ahụ na ndị na-ere ahịa amatala ugbu a na ndị ọrụ mgbasa ozi na-arụ ọrụ maka ha abụọ. Ndị na-ere ahịa na-ele mgbasa ozi na ahịa dị iche iche anya dị ka ohere iji zụọ ahịa ha na obere ego. N'aka nke ọzọ, ndị otu ahụ hụrụ mgbasa ozi na ịre ahịa na-akpakọrịta dị ka ụzọ kwụ ọtọ iji nweta ego na ịntanetị site na ịme ihe ha dịka ọtụtụ, nke ịntanetị.
Dị ka mkpesa nke mgbasa ozi na mgbasa ozi na-abanye na overdrive, n'otu aka ahụ, atụmanya nke ndị mmadụ agbanweela n'ezie gbasara mgbasa ozi na ịzụ ahịa na-akpakọrịta. Achọkwaghị mgbasa ozi mgbakwunye dị ka ụzọ ọzọ maka mgbasa ozi nke ndị na-ere ahịa, ma ọ bụ dị ka ihe mgbakwunye nweta site na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị. Maka ndị otu na ndị na-ere ere, ndị mgbasa ozi na-echebara echiche ugbu a dị ka isi akụ nke ego na nnata.
Ugbu a, anyị chọrọ inyocha ụdị mgbasa ozi mmekọ ga-arụ ọrụ kachasị mma maka ụdị mmadụ ọ bụla? Enwere ụdị ọdịiche dị iche iche na mmemme mgbasa ozi ndị metụtara?
N'ezie enwere usoro mgbasa ozi ndị otu, yana ụdị ahụ ga-adabere na otu ị ga - esi mata ha. Thedị isi nke mgbasa ozi mgbasa ozi na mmemme ahịa na-agbadata n'okpuru nhazi 2: ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa (PPC), yana ịkwụ ụgwọ-kwa-arụmọrụ (PPP).
Perkwụ Pergwọ Kwa Pịa (PPC) - PPC bụ ụdị mgbasa ozi kachasị amara maka ndị na-akpakọrịta na obere saịtị, yana o yikarịrị ka ụzọ kachasị mfe maka ha iji nweta ego. N'ime ụdị mgbasa ozi a, onye na-ere ya na-akwụ onye ya na ya ụgwọ mgbe ọ bụla a na-ezo aka onye ọbịa na saịtị ya website, nke ahụ bụ mgbe ọ bụla mmadụ pịa site na ọkọlọtọ nke onye na-ere ma ọ bụ mgbasa ozi.
Perkwụ Pergwọ Ọrụ (PPP) - PPP na-akpakọrịta mgbasa ozi na-adabara nke ọma dị ka n'etiti ndị na-ere ahịa yana yana ụdị afọ ojuju kachasị maka ndị mmekọ. N'ime ụdị mmemme a, onye na-ere ahịa na-akwụ onye otu ahụ ụgwọ naanị mgbe nkwanye ya gbanwere na ọrụ - nke ahụ bụ mgbe ọ bụla onye ọbịa na saịtị ahụ ọ zoro aka na-azụta ihe ụfọdụ site na weebụsaịtị webụsaịtị ma ọ bụ mgbe onye ọbịa ahụ mechara bụrụ onye ndu. N'aka nke ọzọ, ụdị mgbasa ozi a na-eme ka afọ ju afọ ojuju maka ndị otu a gbara mbọ, maka ịkwụ ụgwọ na mgbasa ozi na mgbasa ozi PPP na-abịakarị n'ọtụtụ 15% na 20% nke ire ere.
GỤRỤ AHỤ Okporo ụzọ Saịtị
Enwere ike ịkọwapụta mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ maka ọrụ n'otu ụdị 2: ịkwụ ụgwọ ụgwọ (PPS) yana ịkwụ ụgwọ-kwa-ụzọ (PPL). Abụọ ndị a bụ ndị ama ama.
a) Na-akwụ Pergwọ Ahịa (PPS) - Na ụdị ụdị mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ, ndị na-ere ahịa na-akwụ onye otu a ụgwọ ọ bụla mgbe ọ bụla onye ọbịa ahụ ọ kọwapụtara na ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa n'ezie na-enweta ihe site na weebụsaịtị ndị na-ere ahịa. A na-akwụkarị ndị mmekọ ụgwọ na akwụ ụgwọ, ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-ere ahịa dị iche iche ga-ekpebi ịkwụ ụgwọ ụgwọ rụziri. Onweghi ihe ndabere nke ụgwọ a bụ, ọ na-akarị ihe karịrị ụgwọ a na-akwụ ndị mmekọ na mmemme mmemme ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa.
N'ime ụdị mgbasa ozi ndị a, a na-akwụ onye mmekọ ahụ ụgwọ mgbe ọ bụla onye ọbịa na saịtị ahụ ọ zoro aka na weebụsaịtị nke ndị na-ere ahịa na-ebu ụdị ngwa ma ọ bụ ụdị ụdị ọ bụla metụtara nzukọ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ewezuga ụdị ụdị mgbasa ozi na ịzụ ahịa ndị a, ọtụtụ ihe dị iche iche na mgbasa ozi ndị ọzọ dị. Ọ bụrụ na otu a dabere na omimi nke netwọkụ na-akpakọrịta, enwere ike ịmata ya dị ka otu ọkwa, ọkwa abụọ, yana mgbasa ozi na ịzụ ahịa ọtụtụ ọkwa.
Otu Ugo, Uzo ato, na kwa mmekorita nke otutu
Kindsdị mgbasa ozi na ịzụ ahịa ndị a dabere na ogo ma ọ bụ ọnụego dị iche iche na netwọkụ na-akpakọrịta na-akwụ ụgwọ.
A) Single Tier - N'ime usoro otu mgbasa ozi na-akpakọrịta, a na-akwụ ndị otu a ụgwọ dabere na ahịa ma ọ bụ okporo ụzọ weebụsaịtị ọ kọwaala onye na-ere ere. Ihe niile akpọrọ aha na mgbasa ozi na azụmaahịa (ntụgharị PPS, PPL, yana PPC) ọnwụ n'okpuru otu ọkwa.
B) Uzo abuo - Na mmemme mgbasa ozi nke okpukpu abuo, ndi otu a anaghi emefu ego maka ahia ahia ma obu ahia nke o na enye ndi webusaiti ya, n’agbanyeghi na ahia obula ma obu ahia ndi ozo ndi ozo debanyere aha ha. dị ka sub-Mgbakwunye nke n'elu-akpakọrịta online marketer.
C) Multi Tier - Multi-tier na-akpakọrịta na-arụ ọrụ mgbasa ozi n'otu aka ahụ, ọ bụ ezie na onye a na-akpakọrịta na-enweta ego a ga-akwụkwu ụgwọ maka ọtụtụ ogo ogo ndị enyi na ọkwa dị iche iche na netwọkụ na-akpakọrịta.
D) Nkesa Mgbakwunye nke Mgbakwunye Inweta - N’udi a, na mgbakwunye na ịkpakọrịta ego maka ndị ahịa ọ bụla ọ kọwapụtara na ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa, a na-akwụkwa onye otu ahụ ụgwọ mgbe ọ bụla onye ahịa ọ zoro aka na-alaghachi na weebụsaịtị nke ndị na-ere ahịa yana nnweta otu ihe ọzọ. Kwụ ụgwọ maka ụdị ụdị mgbasa ozi na-adabere na pasent nke ire ere ma ọ bụ dabere na nlekọta nke ụgwọ.
Onye ọ bụla na-akpakọrịta na ntanetị na-achọpụta na ọrụ mgbasa ozi a dị iche iche na-eru nso na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche maka ha niile. Multi ọnụego otu mkpakọrịta, ọzọ akpọ Multi-Ọkwa Marketing (MLM) bụ nnọọ ihe siri ike ụdị web mgbasa ozi na ọ dịghị-arụ ọrụ maka mmadụ ọ bụla. N'ezie, ọtụtụ ndị ọkachamara na-ere ahịa na-eche echiche banyere MLM dịka amachibidoro ma ọ bụ ihe a na-achọghị.
Onye na-ere ahịa na ntanetị kwesịrị ịnwale ụzọ dị iche iche yana chọpụta nke ga-arụ ọrụ kacha mma maka ya. Ọ ga-elekwasị anya na usoro mgbasa ozi ndị ahụ na-akpakọrịta nke kwesịrị ekwesị maka nhazi ụlọ ọrụ weebụ.
Naanị ka ịrịọ mgbasa ozi na ịzụ ahịa na-aga ahịa abanyelarị na njedebe, n'ụzọ yiri nke ahụ, atụmanya nke ndị mmadụ agbanweela n'ezie maka ọfụma gbasara mgbasa ozi na ịzụ ahịa na-akpakọrịta. Achọkwaghị iche na mgbasa ozi na ịzụ ahịa dị ka usoro nke abụọ nke mgbasa ozi site n'aka ndị na-ere ahịa, ma ọ bụ dị ka ego mgbakwunye nke ndị ọkachamara na-azụ ahịa ahịa. Maka ndị otu na ndị na - ere ahịa otu, mgbasa ozi mgbasa ozi na ịre ahịa ugbu a na-eche maka dị ka isi ihe enyemaka nke ego na ego.
N'aka nke ọzọ, ụdị mgbasa ozi a na-abata nnukwu afọ ojuju maka onye otu ahụ raara onwe ya nye, maka nkwụghachi ụgwọ na mgbasa ozi PPP na-abịakarị n'ọtụtụ 15% na 20% nke ezigbo ihe ahịa. E wezụga ndị a 3 ụfọdụ iche iche nke na-akpakọrịta mgbasa ozi, a ukwuu nke iche iche ndị ọzọ na-akpakọrịta mgbasa ozi iche iche iche.